आज व्यापार मान्छे को एक वृद्धि नम्बर व्यापार संरचना तिनीहरूलाई अफशोर कम्पनीहरु इम्बेड को लाभ के हो बुझ्न थालेका छन्। बढ्दो प्रतिस्पर्धा र अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण कारोबार अस्तित्व को कठोर अवस्था हुक्म। लागत, कराधान को minimization को खर्च सहित स्थायी कमी को बाटो पछ्याउन छैन भनेर कम्पनीहरु, छैन केवल एक शत्रुतापूर्ण वातावरणमा afloat रहन सक्छ।
अर्थव्यवस्था को धेरै क्षेत्रहरु मा अफशोर कम्पनीहरु को शेयर कहिलेकाहीं घरेलू कम्पनीहरु को शेयर संग तुलना मान पुगन, बढ्दै छ। तेल शोधन उद्योग र अपतटीय कम्पनीहरु को जमानत उद्योग शेयर मा 50% भन्दा बढी छ।
यो मात्र एक रूसी प्रवृत्ति छ - अफशोर सञ्चालनका विश्वव्यापी नम्बर निरन्तर छ र निरंतर अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरु को मालिक सुरक्षित र एक वर्ष डलर कम्पनीहरु अरबौं समाउँदै बढ्छ।
तपाईंले पहिले निर्माण संरचना अफशोर कम्पनीहरु मुख्य रूप ठूलो कम्पनीहरु मा लगे मुछिएको छ भने, यो अब प्रवृत्ति परिवर्तन भएको छ छ। अब साना र मध्यम कारोबार को प्रतिनिधिको सक्रिय अन्वेषण छन् यो खण्ड र अपतटीय प्राप्त।
अफशोर कम्पनीहरु द्वारा प्रदान लाभ, यसलाई overestimate गर्न गाह्रो छ। यो पर्याप्त कर बचत र उद्यम को सुरक्षा सम्पत्ति, र अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवेश गर्न सक्ने क्षमता। अफशोर योजनाहरु विभिन्न प्रयोग व्यापार मालिक एकदम लाभ मार्जिन वृद्धि गर्न अनुमति दिन्छ। यस मामला मा, खोल्ने र अपतटीय कम्पनीहरु को मर्मतका मा न्यूनतम रकम खर्च।
अफशोर खुला आज धेरै सरल छ। हामी मात्र यो बजार मा व्यावसायिक सेवा प्रदान कम्पनी सम्पर्क गर्नुपर्ने र विशेषज्ञहरु चाँडै र कुशलतापूर्वक दर्ता वा अफशोर तयार को पुन दर्ता सबै काम पूरा गर्नेछ।
एक निवास परमिट वा अस्थायी दर्ता - नियम, कम्पनी मालिक मात्र ठेगाना को एक पासपोर्ट र प्रमाण प्रदान गर्न आवश्यक छ। त्यो अफशोर कम्पनीहरु टाढैबाट प्रदर्शन - मालिकले एजेन्सी को कार्यालय भ्रमण गर्न आवश्यक छैन, ई-मेल द्वारा स्क्यान गरिएको कागजात पठाउन पर्याप्त छ। यस मामला मा एक कम्पनी को दर्ता लागि समाप्त कागजातहरू मेल वा कुरियर द्वारा पठाइनेछ।
सबैभन्दा अफशोर कम्पनीहरु बीच लोकप्रिय बेलीज, पनामा र ब्रिटिश द्वीपहरु Virzhinskih मा दर्ता छन्। यी न्यायालयहरुमा सबै वर्ष विश्वसनीय कर havens, विभिन्न सस्ती लागत, कुशल दर्ता प्रक्रिया, गोपनीयता को एक उच्च डिग्री छन्। यो बिल्कुल असम्भव थियो कम्पनी लाभकारी मालिक बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न, व्यापक नाममात्र सेवा प्रयोग। यसको मतलब एक धेरै भद्र शुल्क (300 को औसत - $ 500 प्रति वर्ष) को लागि उम्मेदवार शेयरधारकों र निर्देशक, कम्पनी को अधिकारीहरु छन् द्वारा भाडामा। तिनीहरूले लाभार्थीको (कम्पनी मालिक) को ब्याज मा केवल कार्य कि दस्तावेज छन्।
त्यहाँ कि उम्मेदवार सेवा असुरक्षित छ प्रयोग रूसी व्यवसायी बीच एक साधारण misconception छ। व्यवहार मा, यो छैन मामला छ - उम्मेदवार सेवाहरू को प्रयोग अभ्यास धेरै वर्ष बिताए र सम्पत्ति को निकासी को सम्भावित खतरा बोक्न छैन - प्रदान बैंक खाता एक मूल्यवर्ग खुलेको, तर केवल खाता को एकमात्र प्रशासक बन जो लाभार्थीको, मा छन्। को उद्घाटन देखि बैंक खाता कर वा सरकारी अधिकारीहरूले को सूचना बिना ठाउँ लिन्छ, नाममात्र मान मा, यो मामला मा त्यहाँ कम्पनी खाता नजिक प्राप्त गर्न कुनै तरिका हो।
विभिन्न अफशोर न्यायालयहरुमा फरक लाभ व्यापार मालिक प्रस्ताव। एक धेरै nuances layman बुझ्न गाह्रो ठूलो, मा यसैले निर्णयाधिकार को विकल्प को प्रश्न ठूलो जिम्मेवारी नजिक हुनुपर्छ। तपाईं अफशोर खोल्न चाहनुहुन्छ भने, व्यावसायिक मदत माग्न गर्न सबैभन्दा उचित।
Humic मल: कसरी लागू गर्ने? विवरण
मुद्रास्फीति: अवधारणा, मुद्रास्फीति को स्तर, यसको प्रकार
मुद्दा मा मदत: रक्सी मा राजस्व टिकट कसरी जाँच गर्ने?
लिक्विडिटी विश्लेषण र बैंक लिक्विडिटी को कुशल व्यवस्थापन
1956, कुन कुखुरामा कुरो यसको विशेषताहरू र अनुकूलता
के गर्मी र जाडो मा स्पेनी जलवायु
को पेंडुलम सिक्ने - एक साधारण पेंडुलम oscillation को अवधि कसरी पाउन
कुन स्वायत्त ताप प्रणालीहरू उत्तम छन्। बयलरहरु गर्म पानी बयलर - विश्वसनीय र अर्थव्यवस्था।
सेनेगल किन भनिन्छ बदाम गणतन्त्र: इतिहास र अर्थव्यवस्था को एक बिट
जस्ता लेप। आवेदन
आफ्नो हात संग सर्प कसरी बनाउने। तीन मूल लेख
अपार्टमेंट मा व्यक्तिगत ताप तपाईं पनि चरम चिसो मा न्यानो प्रदान गर्नेछ
मखाचकला: कहाँ र कुन उपलब्ध छ
कार्बन लामो बलिरहेको बयलर: काम सिद्धान्त, लाभ र बेफाइदा